Ubudlelwano: Sebenzisa Inethiwekhi Yakho Ukuvala Iziphesheli Eziningi Ngalesi Sipulatifomu Sobunhloli Nobudlelwano | Martech Zone
Ukuphathwa kobudlelwano bamakhasimende obumaphakathi (CRMIsixazululo siyipulatifomu enhle emile… i-database yokuxhuma, imisebenzi yabo, futhi; mhlawumbe, ukuhlanganiswa okuthile nezinye izinhlelo ezinikeza ukuqonda okwengeziwe noma amathuba wokumaketha. Ngasikhathi sinye, konke ukuxhumana ku-database yakho kunokuxhumana okuqinile, okunethonya kwabanye abathengi nabenza izinqumo ngebhizinisi. Lesi sandiso senethiwekhi yakho asithintwanga, noma kunjalo.
Buyini Ubuhlakani Bobuhlobo?
Ubuchwepheshe bezobuchwepheshe bobudlelwano buhlaziya idatha yezokuxhumana yeqembu lakho bese yakha ngokuzenzakalela igrafu yobudlelwano edingekayo ukufeza okubaluleke kakhulu ebhizinisini. Igrafu yobudlelwano iveza umbono ophelele wokuthi iqembu lakho lazi bani nokuthi libazi kangakanani, ngaleyo ndlela likukhombisa izindlela ezihamba phambili zezethulo noma zokudluliselwa.
Kungani Ukumaketha Okusekwe Akhawunti kanye nobuhlakani bobudlelwano kuyinyunyana ephelele
Ukuhlangana kufana nokuhlanganiswa kwe-LinkedIn ne-Salesforce, kuphela nge-Artificial Intelligence ukuqonda amandla obudlelwano (ngokungafani ne-LI) nangamathuluzi we-automation wokukhipha ubuhlungu ekuphathweni kweCRM. Izakhiwo zobuchwepheshe obunobunikazi benkampani futhi zihlaziya amaphuzu wedatha angaphezu kwezigidi eziyinkulungwane kuma-imeyili, amakhalenda, kanye nemithombo yenkampani yangaphandle ukunikeza abasebenzisi amathuluzi abawadingayo ukuphatha ngokuzenzakalela ubudlelwano babo obubaluleke kakhulu, ukubeka phambili ukuxhumana okubalulekile, nokuthola amathuba angavulekiwe.
Ubuntu ithwebula ngokuzenzakalela konke ukuxhumana Ithimba lakho linokuxhumana noma inhlangano. Iphinde icebise noma iyiphi iphrofayili enemininingwane yobuhlobo ebalulekile engahle ingafakwa emithonjeni yemininingwane evela eceleni efana neCrunchbase, i-Clearbit, kanye nemininingo yakho egciniwe ephathelene nawe.
Ubuntu retroactively kwakha iRolodex ebonakalayo kuzo zonke izinkampani nabantu iqembu lakho elihlanganyele nabo futhi balivuselela ngesikhathi sangempela.
I-Affinity Alliance ikuvumela xhuma nabanye abangaphandle kwethimba lakho ukuqonda ukuthi ngubani kunethiwekhi yakho onganikeza izingeniso ezibaluleke kakhulu.
I-Affinity Analytics iyithuluzi lokubika eliyingqayizivele, lesikhathi sangempela elihlinzeka ngemininingwane yokuqala yezimboni ebudlelwaneni bangaphandle beqembu nokuthi ukuxhumana kwabo kuthinta kanjani ukugeleza kwenkampani, ukuhamba kwamapayipi, imisebenzi yokuxhumana, nezinye izinkomba zokusebenza ezibalulekile. Manje isiyatholakala ngokuhlanganiswa nenkundla yezobunhloli neyezibalo ezivela ku-Google Cloud, Bheka, I-Affinity Analytics iza njengengxenye edidiyelwe yezinhlelo zePrimy and Enterprise zepulatifomu ye-Affinity noma njengokuthuthuka kwamakhasimende e-Professional.
I-Affinity Analytics yakhela kudatha esemqoka epulatifomu yobuhlakani bobudlelwano be-Affinity ukuhlinzeka ngemininingwane ejulile ngemininingwane yeqembu le-CRM. Ngenkathi amapulatifomu amaningi e-CRM enikeza kuphela amakhono ayisisekelo, aphansi okubika, i-Affinity Analytics inikezela ngamadeshibhodi enziwa ngezifiso ngokuphelele kanye nembumbulu, imibiko yesikhathi sangempela ukusiza izinkampani ukuthi zihlaziye ngokujulile izitayela kanye nabashayeli bokusebenza okuthinta izinqubo zebhizinisi ezibucayi.
Imibiko yokubona ngamehlo engaphezu kwengu-20 iyatholakala kunoma yiluphi uhlu ngaphakathi kwepulatifomu yobuhlakani bobudlelwano be-Affinity. Yonke imibiko ingafakwa ngokujulile isuselwe kumasegmenti wangokwezifiso afana nemboni emile, uhlobo lwenkampani, usayizi wenkampani, nezinye izinto. Abasebenzisi bangathumela kalula noma bathumele i-imeyili noma yimiphi imibiko ukuze babelane ngayo nababambiqhaza abakhulu.
Isethi yedatha efakiwe egcwele inika izinkampani ukubonakala kwesikhathi sangempela ekusebenzeni kweqembu labo futhi zibenze bakwazi ukungena kudatha ukuthola izimpendulo zemibuzo mayelana nokuthi bangayitshala kuphi futhi kanjani imizamo yeqembu labo. Ngenkathi amabhizinisi ekwazi ukwakha noma iyiphi inombolo yemibiko enziwe ngezifiso nge-Affinity Analytics, imibiko emibili efakwe ngaphambilini ifaka:
Ukuhlaziywa Komsele: Inika amandla izinkampani ukuthi zilandelele ukusebenza kwepayipi lazo ngokuhlaziya zonke izigaba zenqubo yesivumelwano, kufaka phakathi amanani wokuguqulwa esigabeni ngasinye, isikhathi esimaphakathi amadili ahlala esigabeni ngasinye, umsebenzi wokugcina ngaphambi kwamadili awiniwe noma alahlekile, lapho amadili amahle kakhulu ekhona ukukhishwa kusuka, nokuningi.
Imibiko Yomsebenzi Weqembu: Inikeza ukuhlaziywa kwama-imeyili weqembu, izingcingo, imihlangano neminye imisebenzi, edilizwe imboni, isifunda, nokuningi, ukuze kunikezwe ukuqonda okubalulekile ekusebenzeni kweqembu kanye nempumelelo noma ukushiyeka kokusebenzisana kwabo namathemba noma oxhumana nabo.
Ipulatifomu ye-Affinity isiza abasebenzisi ukuphatha ubudlelwano kubantu abangaphezu kwezigidi ezingama-30 nezinhlangano eziyizigidi eziyi-7. Nge-Affinity Analytics, abasebenzisi manje sebenokuqonda okwengeziwe ekusebenzisaneni kwabo nabathintana nabo bangaphandle nokuthi leyo misebenzi ingenziwa kanjani ngcono ukuqhutshwa kokuphathwa nokuphathwa kwamapayipi.
Funda kabanzi Nge-Affinity Funda kabanzi Nge-Affinity Analytics
Tags: ukuzwanaizibalo zokusondelanaaiukuhlakanipha okungekhona okwangempelaCRMidatha ye-crmukuphathwa kwamakhasimende kwamakhasimendeizibalo zefaneliumbhekiubuhlakani bobudlelwanoipulatifomu yobuhlakani bobudlelwanoumsebenzi weqembu lokuthengisa